SuperGIS Desktop, Qaar ka mid ah isbarbardhigga ... - Gofumed
SuperGIS Desktop, waxoogaa isbarbardhig ah ...
Maarso, 2013 Geospatial - GIS, GvSIG, SuperGIS
SuperGIS waa qayb ka mid ah qaabka Supergeo oo aan ka hadlayay maalmo yar ka hor, oo guulo fiican ka soo hooyey qaaradda Aasiya. Kadib markii la baaro, halkan waa qaar ka mid ah riyooyinka aan qaatay.
Guud ahaan, waxay ku dhawaataa wixii barnaamij kale ee tartanka ah. Waxay keli ku kici kartaa Windows, waxaa suurtagal ah in lagu sameeyo C ++, sidaas darteed waxay ku socotaa xawaare aad u wanaagsan; inkasta oo tani ay kuu keenayso faa'iido darrada ah inaadan wax tarin ... dhibaatada ay aad u yartahay qaar kale oo ay xalinayaan.
Marka la eego muuqaalka, waxay u egtahay mid sida ESRI ee ArcGIS, oo leh wejiyo dabacsan oo la marin karo, lakabka kooxeed, jiidi iyo hoos u dhac. Intaa waxaa dheer, macquulnimada dhismaha iyo miisaaniyadda ayaa aad u calaamadsan si ay ula tartamaan qaabkan; waxa laga arki karo balaarinta ugu weyn:
Falanqeeyaha Muuqaalka, Shabakada, Mawduuca, Muuqaalka Aqoonta, 3D, Falanqeeye Biyo-duwanaanta.
Waxaa intaa dheer waxaa la buuxiyaa codsiyada ku jira qaabka desktop-ka: SuperGIS Data Manager, oo u dhiganta ArcCatalog iyo SuperGIS Converter, oo u dhiganta ArcToolbox.
Macquulnimada dhismaha mashaariicda waxay ku jiraan faylasha xml ee caadiga ah, iyadoo la kordhinayo .sgd taas oo ah sida .mxd / .apr ee ArcGIS ama a .gvp ee gvSIG. Ma jiro wax dheeraad inay dajiyaan mashruuc ka barnaamij kale GIS iyo halka macquulka ah waxaa loo salaysan sida loo akhriyo mashaariicda daabacaadan IMS, waxa ay sidoo kale taageertaa xogta gudahood Geodatabase Personal (MDB), MS SQL Server, Oracle astaanta iyo PostgreSQL Server.
Nooca .sgd wuxuu lahaa laba isbedel oo muhiim ah; midka hadda ka socda 3.1a ayaa soo dejiyey mid hore oo ka mid ah version 3.0.
DWG, illaa 2013
Wax kasta waxay u muuqdaan kuwo aad u caan ah waxa qalab kale oo ay sameeyaan, inkastoo halkan ay taagan tahay in qaabka vector dwg, dgn, dxf ay qirayaan qoraalladii dhawaa.
Ma aqaan sida ay u gaari doonaan, laakiin waa mid ka mid ah daciifnimada Manifold GIS, gvSIG iyo software kale oo furan. Marka la eego faylka dgn / dwg, waxay kuu ogolaaneysaa inaad miisaaniyad u yeelatid, iska gooyso, u jeedso, xitaa haddii lakabka keliya (heerka), xitaa haddii loo adeegsado tixraac; si aad uhesho waa inaad ku dhoofisaa qaabka .geo ama .shp. Waxaa xiiso leh in la caddeeyo in qaabka .geo oo keliya uu taageersanyahay geesoole, jilicsanaan iyo dhibic; badinta waxaa kaliya oo lagu taageeraa .shp marka la abuurayo lakab cusub.
Akhri microstation dgn ee 8 iyo version dwg of AutoCAD version 2013 ... waxay u qalantaa mudnaanta. Inkasta oo ay dhaaftay gvSIG, waxay bedeli kartaa dwg, dxf iyo kml, halka SuperGIS ay kaliya u rogi karto shp iyo qaabka loo yaqaan extension .geo. Qaabka kale ee qaabka sheyga ah waa .slr (Supergeo Layer File), oo aad ka shaqayn karto kiniinnada isticmaalaya SuperSurv, iyo sidoo kale macaamilka miiska.
Laga soo bilaabo SuperGIS Data Converter waxad ka dhigan kartaa qaabka udhaxeeya qaababka hore, oo ay ku jiraan qaabka kml (Google Earth), e00 (ArcInfo), cef (qaabka caadiga ah ee isdhaafsiga).
SGR, oo ah qaabka macaamiisha ee SuperGIS
Habka .sgr wuxuu leeyahay Supergeo; Tani waxay ku socotaa xawaaraha qunyar-socodka ah ee dejinta iyo daaweynta takhasuska leh ee Falanqaynta Sawirka.
Waxay leedahay faa'iido darro ah in aysan akhriyin ENVI, SPOT faylasha kuwaas oo lagu taageerayo barnaamijyada sida Manifold GIS iyo gvSIG. Awoodaha sawirrada jilidda waxay aad ugu badan yihiin waxa gvSIG / ArcGIS uu sameeyo.
Laga soo bilaabo SuperGIS Data Converter waxad is barbar dhigi kartaa qaababka img, gis, lan (Erdas), tif, ecw, sid, jpg, bmp, iyo ASCII.
WMS (adeegga khariidada Webka)
WFS (Adeegga muuqaalka bogga)
WCS (Adeegga Gargaarka Web)
WMTS Tani waa qaabka maareynta xogta masaajidka (fayeysiinta)
Tani iyo waxyaabaha kale ee aan la iman karin version download, waxaa lagu daraa sida ku darsaday: Client OGC, GPS, Client Geodatabase, SuperGIS Server Macaamiisha Desktop Macmiilka iyo Macaamiisha Desktop Desktop Macmiilka.
Xaaladda qaabka kmz oo keliya ayaa ku taageera 3D Analyst. Marka la eego qaabka shabakada, .geo waxay taageertaa iyaga, awood u leh inay soo dhoofsadaan Isticmaalka DataConverter faylasha qaabka, iyo sidoo kale xogta dijitaalka ah ee laga dhoofin karo faylasha qaabka iyo sgr.
Had iyo jeer waxaan ku dhuftey qaabkan, guud ahaan wuxuu inooga baahan yahay in aan isticmaalno barnaamijka CAD si loo dhiso xog iyo GIS horeba markaan la shaqeynayo. Waa horumar hore oo muhiim ah aad qabtay gvSIG iyo Quantum GIS ee ku saabsan arrintan, oo ay ku jiraan baakooyinka dheeraadka ah ee kiiska Aaladaha OpenCAD taas oo aan mar dambe ka cabanayno.
Xaaladda SuperGIS, waxay u ogolaataa daabacaadda hal ama dhowr lakab, qaabka caadiga ah. Kuwa leh wakhti dheer .geo iyo .shp ayaa la muujiyey, waxaad kaydin kartaa oo joojin kartaa editing. Intaa waxaa dheer, isla hal la mid ah waxaa jira isticmaalo daabacan oo caadi ah kuwa u dhigma gawaarida gvSIG:
Aynu aragno isbarbardhigga qalabka CAD-da ah ee AutoCAD, gvSIG iyo SuperGIS, ayadoo la tixgelinayo liistadii hore ee macaamiisha AutoCAD.
No. Amar AutoCAD GvSIG SuperGIS
9 Si aad u guurto
10 Si aad u leexiso
11 Si aad u fuusho
13 Tafatir duldhigyada
14 loogana faa'iidaysto
21 Si aad u kala bixiso
22 Iskudhin badan
23 Is barbardhig
24 La sii wado
Marka hore 14 (1 ilaa 14) ayaa ku jiray liistadayda 25 badi amarrada la isticmaaloQaar ka mid ah maahan sida saxda ah, sida: - ku biir / xayiraad
-autopolygon / boundaryHere, waxay si la yaab leh u tahay in SuperGIS ay ku jirto hal talis koox ka badan hal, oo u muuqda qaab guud ahaan, sida kiiska "Sketch" oo ay ku jiraan xariiq, polyline, dhibic iyo multipoint.
Amarka lagu beddeli karo joomatijiyada jilicsanaanta edebta, dhejinta, xajmiga saamigalinta.
Ma jiraan wax amar ah oo aan u adeegsanay CAD, sida Array, Fikradda joogtada ah, ellipse. Ficil ahaan ma ahan kuwo deg deg ah inkastoo gvSIG ay ku midoobeen qayb ka mid ah samaynta waxa muhiimka u ahaa CAD.
Waxay sare u qaadaan Kobcin iyo Nuqul ku siman. Sidoo kale amarka wareega ee kuu ogolaanaya in aad gashid iskuduwaha goobta.
Waxqabadka wuxuu u muuqdaa mid la taaban karo, wuxuu siinayaa fikradda ah in SuperGIS ay arrintan u timid tan iyo hawlo fara badan oo la shaqeeya dadka isticmaala dhabta ah. Xaaladda saxda ah, waxaa jira fursado fudud oo loogu talagalay bartamaha, isgoyska iyo meesha ugu dhow. In kasta oo ay sidoo kale la isku qiyaasin karo haddii loo isticmaalo in lagu daboolo ama geesinimo leh dulqaad gaar ah iyo lakab kasta.
Iyadoo amarrada daaqadaha ee daaqadaha lagu sara kiciyo; waxaa laga abuuri karaa iskudhaf, masaafo / koorso, masaafada / masaafada ... inkasta oo qaar ka mid ah aan helay falsafadda shaqsiyadeed ... waxay u baahan tahay xirfad ahaan qalab cusub.
Intaa waxa dheer, amarrada loo baahan yahay geeddi-socodka GIS waxay ku taagan yihiin, kuwaas oo aan daneynin CAD, sida:
Qeybinta (kala qaybsanaan), qayb ka mid ah vertex, Guud ahaan, Smoothen (siman), oo aad ugu badan shaqada GIS. Marka lagu daro geeddi-socodka guud ee geoprocessing kuwaas oo ku dhawaad ​​nuqul ah / dhejin wixii aan horey u ogaanay.
Heerka laybarashada ee daabacaadda, waxaan ku soo dhaweynayaa maqaalkan soo socda; maadaama aan haysto boos celintaydii oo aan sugi lahaa markaa in aan yeesho horumarinta kala duwan ee ka shaqeynaya taas oo aan soo jeediyay suurtagalnimada in aan badbaadiyo dowladaha dimoqraadiga ah, si ay u awoodaan in ay ku dhajiyaan isku qaabaynta munaasabadaha kala duwan. Waxaa la ii ballan qaaday in aan tani u hayo qaabka SuperGIS Desktop 3.1b ee rubuca sadexaad ee 2013; waxay la mid tahay waxa CadCorp ama Manifold GIS uu sameeyo.
Gebogebada, waxay u muuqataa qalab aad u fiican oo ku jira heerka desktop GIS.
Kuwa doonaya in ay isku dayaan,
Halkan waxaad ka soo qaadan kartaa SuperGIS Desktop
Post Previous«Previous Baqshadaha aan farsamada ahayn
Post Next Sheekooyinka 3 iyo waayo-aragnimada 5 ee goobaha jilicsanNext »
Hal Jawaab u Jawaab "SuperGIS Desktop, Qaar ka mid ah Isbarbardhiga ..."
Rosario isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin macluumaadka. - Si aad u soo dejiso oo isku day!